မင်းရဲ့ cardigans တွေကိုဒီအတွေးတွေနဲ့ပေါ့ပေါ့ပါးပါးအကျိုးသက်ရောက်မှုပေးပါ စတိုင်လ်အမျိုးသားများ
ရုံးအပြင်ဘက်တွင်သင်၏ cardigans ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုမည်သို့ပေးရမည်နည်း
Cardigans သည်ရုံးခန်းကိုပုံမှန်ကျပန်းကြည့်ရှုရန်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ သို့သော်လမ်းပေါ်တွင်ဤအဝတ်အစားကိုပိုမိုပေါ့ပေါ့တန်တန်အကျိုးသက်ရောက်မှုပေးရန်လွတ်လပ်ခွင့်ရှိသည်။ တစ်ခုခု အသုံးအများဆုံး tuxedo ကော်လာမော်ဒယ်များနှင့်ပင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်.
သငျသညျ cardigans ဝတ်ဆင်ချင်ပေမယ့်သူတို့ကသင့်ကိုအဟောင်းကြည့်ရှုစေလိမ့်မည်ကိုစိုးရိမ်သို့မဟုတ်သင်ရိုးရိုးရှာဖွေနေလျှင် သင့်ရဲ့ cardigans ထဲကပိုရရန်အချို့သောလှုံ့ဆော်မှုအောက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်များနှင့်မည်သို့ပေါင်းစပ်နိုင်သည်ကိုစဉ်းစားရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့တိုက်တွန်းပါသည်။
2 ဂျင်းဘောင်းဘီနှင့် ၀ တ်စုံများကို ၀ တ်ဆင်ပါ
သရက်သီး၊ ယူရို ၂၉.၉၉
တီရှပ်များကစမတ်ကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်လုပ်ခြင်းဖြင့် Smart ကိုဖျက်ပစ်သည် အဆိုပါ cardigans အပေါ်, အသွင်အပြင်ကူညီခြင်းလျော့နည်းအလေးအနက်နှင့်လမ်းပေါ်အဝတ်အစားပေါ်လာပုံ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Cardigan ကိုအဝတ်အထည်၏လေထဲတွင်ချက်ချင်းဖယ်ရှားလိုသောအခါ၎င်းသည်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။ Mandarin ကော်လာနှင့်သစ်သားအကျီင်္ရှပ်အင်္ကျီများသည်ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုများဖြစ်သည်။
ဂျင်းဘောင်းဘီနှင့် ၀ တ်စုံများကို ၀ တ်ဆင်ပါ
ရုံးအပြင်ဘက်တွင်ဂျင်းဘောင်းဘီနှင့်ဂျော့ဂ်ျသမားများအတွက် ၀ တ်စုံများနှင့် ၀ တ်စုံများကို ၀ တ်ဆင်သည်။ Y သင်၏ cardigan အားဘောင်းဘီများနှင့်ပေါင်းစပ်သောအခါတွန့်ဆုတ်မနေပါနှင့်.
ဂျင်းဘောင်းဘီများသည်စိတ်ချရသောအလောင်းအစားဖြစ်သော်လည်းမြင့်မားသော / နိမ့်ကျသောအတွေးအခေါ်နှင့်ပေါင်းစပ်ထားသော်လည်း ၀ တ်စားဘောင်းဘီကလည်းထိုကျပန်းသက်ရောက်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့အားကူညီနိုင်သည်။ ဤလိုင်းများအောက်တွင်ဥပမာတစ်ခုကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။
အခြားအစားအရောင်တစ်မျိုးသုံးခြင်းသည်ကြည့်ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအခြေခံကျကျပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် beige ကို smart casual style နှင့်ပေါင်းသင်းနေစဉ်သင့်အနေဖြင့်သင့် cardigan တွင်သင့်လျော်သောအနက်ရောင်အပိုင်းအစများထပ်ဖြည့်ခြင်းကသင့်အားပေးလိမ့်မည် သင့်ရဲ့အသွင်အပြင်ကိုကျောက် Vibe ချွတ်ကူညီပေးပါမည်.
ပါးလွှာသောဂျင်းဘောင်းဘီကိုစဉ်းစားပါ။ ၎င်းကိုအနက်ရောင် cardigans များနှင့် beanies, ring နှင့် chains ကဲ့သို့သောမြို့ပြဆက်စပ်ပစ္စည်းများဖြင့်သင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
မစ္စတာပေါ်တာ, € 995
မင်းရဲ့ cardigan ကပေါ့ပေါ့ပါးပါးအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရဖို့အတွက်ဖိနပ်ကအရမ်းအရေးကြီးတယ်။ စမတ်ဖိနပ်များနှင့်စမတ်ကျပန်းကိုပင်ရှောင်ပါBrogues လိုမျိုးအစားဖိနပ်တွေ၊ အလုပ်ဖိနပ်တွေနဲ့ချယ်လ်ဆီးတို့အတွက်အလောင်းအစားလုပ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့သည့်အနက်ရောင်အပိုင်းအစများနှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » ပုံ » ရုံးအပြင်ဘက်တွင်သင်၏ cardigans ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုမည်သို့ပေးရမည်နည်း
ဒီကျဆုံးခြင်း / ဆောင်းရာသီ 2017 ၏ဆက်ဆံမှုနှင့်လေးကိုဆက်ဆံမှု